Ganacsiga Suuqa Kaaraan oo xiran | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ganacsiga Suuqa Kaaraan oo xiran
Ganacsiga Suuqa Kaaraan oo xiran
Wararka inaga soo gaaraya degmada kaaraan ee Gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in saakay gabi ahaanba uu xiran yahay ganacsigii ka socday suuqa degmada Kaaraan.
Suuqa gudihiisa iyo Agagaarkiisa waxaa ka socda Banaanbax aad u balaaran oo ay dhigayaan dadka ganacsatada ah, waxay sheegeen dadka banaanbaxa dhigaya in ay ka cabanayaan ciidamo hubaysan oo Militari ah, kuwaasi oo dilal ka gaysta Suuqa gudihiisa.
Dadka Banaanbaxa dhigaya oo isugu jira rag iyo Dumar ayaa ku qaylinaya erayo ka dhan ah Ciidamada dowladda, waxayna sheegayaan inay doonayaan Suuqa dilalka in laga dhaafo.
Qof ka mid ah ganacsatada Suuqa Degmada Kaaraan, ayaa sheegay in shalay ugu dambeysay Suuqaasi lagu dilay qof ka mid ahaa ganacsatada, kadib markii uu diiday inuu dhiibo lacag dhan Shan kun oo Shilin Soomaali ah.
Ganacsatada ayaa Maamulka degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir waxa ay ku eedeeyeen arintan inay wax ka qaban waayeen, maadaama dilalka iyo handadaada ganacsatada Suuqa lagu hayo ay korodhay.
Gudoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Eng. C/raxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) ayey ugu baaqeen ganacsatada inuu wax ka qabto arintan, maadaama Maamulka Degmada uu ku fashilmay wax ka qabashada dhibaatooyinka ganacsatada loo gaysto.